Fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany Mila alamina ireo mpisehatra
Nanatontosa latabatra boribory nasionaly izay nokarakarain’ny Search For Common Ground (SFCG) tetsy amin’ny Hotely Panorama Andrianarivo omaly alakamisy 07 martsa ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany.
Atrikasa nahian’ny minisiteran’ny harena ankibon’ny tany, Fidiniavo Ravokatra izay nampitondraina ny lohahevitra hoe “fampiroboroboana ny fitondrana tsara tantana sy ny fanajana ny zon’olombelona amin’ny sehatry ny fitrandrahana”. Tafiditra amin’izany ny vato sarobidy sy ny solika. Efa nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny taona 2016 nataon’ireo mpitrandraka, ny mponina sy ny fitondram-panjakana ary ireo mpitandro ny filaminana miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ka fanamafisana izany no tanjon’ny fifampidinihina amin’ny latabatra boribory. Matetika rehefa tsy voarindra tsara ny andraikitra dia misy hatrany ny disadisa amin’ireo mpisehatra efatra ireo ka izay no anton’ny fifanakalozan-kevitra mba hisian’ny fangaraharana sy ahafantarana ny zo sy ny andraikitry ny rehetra mba hisian’ny fiaraha-monina mirindra. Hojerena aorian’izao atrikasa izao moa ireo mety trangana disadisa misy sy mety hampiahiahy ary ireo vahaolana ny amin’izany eny anivon’ny toerana anaovana fitrandrahana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisana amin’ireo mpisehatra efatra ireo mba ho matotra kokoaka hiteraka fampandrosoana.